1. Nodimandry ny alahady lasa teo, tokony ho tamin’ny 6 ora maraina, teo amin’ny faha-46 taonany, i Tovoherizo Michaël Eric, na i Djaig amin’ny anarana maha-mpanakanto azy.
Nodimandry i Karl Lagerfeld, ilay amperoran’ny marika “Chanel”
Nodimandry ny talata 19 febroary, teo amin’ny faha-85 taonany ilay mpamorona, Karl Lagerfeld. Efa narary herinandro vitsy izay ity mpamorona ity ary voalohany teo amin’ny fiainany no tsy nanatrehany filatroana nokarakarain’ny “Chanel”, ny 22 janoary lasa teo.
Toa ny ahoana ny lehilahy manintona an’i Taylor Swift, JLo…?
Tsy mifidy taona, bika aman’endrika na firazanana ny fitiavana fa rehefa hitia olona iray dia fanontaniana voalohany mipetraka ihany ny endrika sy ny toetoetry ny olona mety hanintona. Mba toa ny ahoana ary ireo lehilahy na vehivavy manintona ny olo-malaza ?
Ireo fiakanjo nanamarika ny “Grammy Awards 2019”
Notanterahina ny 10 febroary lasa teo tao Staples Center ao Los Angeles ilay hetsika Grammy Awards, fanolorana amboara ho an’ireo olo-malaza mendrika izany.
Mpikambana ao amin’ny tarika Spesialista i Djaig. Sady mpamoron-kira izy no mpitendry amponga sy mandihy ihany koa. Raha ny fantatra dia nianjera tamin’ny tohatra i Djaig ka io no nitarika ny fahatapahan’ny lalandrà na AVC teo aminy.
Tsy nifoha intsony ity mpanakanto ity, taorian’izany, ary dia izao nindaosin’ ny fahafatesana izao. Andrasana eny amin’ny trano fonenany eny Namontana, akaikin’ny CSB II, ny nofo mangatsiakan’i Djaig ary ho tanterahina ny alarobia 14 martsa ho avy izao ny fandevenana azy, eny Anjomakely Bongatsara. Namela mananon-tena sy kamboty efatra ity mpanakanto ity.
2. Tsy hiverina hiaka-tsehatra intsony ny tarika Spice Girls, na dia efa betsaka aza ny resaka nandeha mahakasika izany. Ny tena marina dia tsy tao anatin’ny praograman’i Victoria Beckham mihitsy ny hiverina hiaraka indray amin’ny tarika. Tsy vao tamin’ity taona ity anefa izany fa efa ela, saingy ireo mpankafy ny tarika no tena manosika azy ireo hitambatra eny an-tsehatra indray. Malahelo ihany ireo mpikambana hafa, toa an’i Mel C, rehefa nahatsapa fa tsy maniry ny hamerina ireo fotoana nahafinaritra niarahan’izy ireo intsony i Victoria Beckham.
3. Niakatra indray ny teti-bola holaniana amin’ny mariazin’ny printsy Harry sy Meghan Markle, izay hotanterahina ny 19 mey ho avy izao. Manodidina ny 400.000 livres indray mantsy ny sandan’ny akanjo mariazin’i Meghan Markle. Mety ho ilay trano fanjairana britanika Alexander McQueen no hikarakara izany akanjo mariazy izany. Ilay mpamorona Sarah Burton, izay mitantana io trano io moa, no nanamboatra ny akanjo mariazin’i Kate Middleton. Betsaka ireo tolagaga amin’ny vidin’ity akanjon’i Meghan ity, satria ny akanjo mariazin’i Lady Diana dia 110.000 livres no nanamboarana azy ary 250.000 livres kosa ny an’i Kate Middleton.
4. Ny 15 martsa ho avy izao no hotanterahina ny fitsarana ilay raharaha mahakasika ny didim-pananana navelan’i Johnny Hallyday, ao Nanterre Frantsa. Tsy hanatrika izany anefa i Laeticia Hallyda,y satria tsy mahazo mivoaka an’i Etazonia izy, hatramin’ny 15 jona. Telo volana mantsy no tsy maintsy hijanonana ao an-toerana, raha toa ka te hahazo ny taratasy ara-dalàna manamarina fa mponina ao Etazonia tanteraka ny olona iray. Tsy maintsy hifampiresaka amin’ny alalan’ny aterineto amin’ireo zanak’I Johnny Hallyday izany izy, raha te hamaha ny olana. Aorian’io fe-potoana io koa anefa dia fantatra fa tsy maminavina ny ho ao Frantsa mihitsy i Laeticia Hallyday. Samy manenjana ny tady, na izy, na i Laura Smet sy David Hallyday, ao anatin’ity raharaha ity.